चलचित्र 'स्वर्ग मेरो गाउँ’को ट्रेलर सार्वजनिक !(भिडियो)
चलचित्र ‘स्वर्ग मेरो गाउँ’को ट्रेलर सार्वजनिक !(भिडियो)
कोशी अनलाइन बिहिबार, २० पुष, २०७४ मा प्रकाशित
हालै मात्र चलचित्र ‘स्वर्ग मेरो गाउँ’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । रामकृष्ण बजगाईं निर्देशित यो चलचित्रमा प्रमुख भूमिकामा नायक नरेन खड्काको अभिनय रहेको छ । नरेनलाई चलचित्रमा एक गाउँले युवकको भूमिकामा देख्न सकिन्छ । रोमान्स, एक्सन र प्रेमकथाले भरिपुर्ण यो चलचित्रमा शहरबाट गाउँ घुम्न आएका युवतीहरुले गाउँलाई नै स्वर्ग बनाउन लागिपरेको कथा बोकेको छ ।
पुष्कर बरालको प्रस्तुतिमा द्रुप्दा बजगाईं र लक्ष्मण श्रेष्ठले निर्माण गरेको यस चलचित्रको कथा सुनिता बराल बजगाईंले लेखेकी हुन् । छायांकनमा पवन गौतम र द्वन्द्ध निर्देशक अष्ट महर्जन रहेका यो चलचित्रमा गोविन्द राईको कोरियोग्राफि रहेको छ । आउँदो माघ २ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने यो चलचित्रमा नरेनका साथ रामकृष्ण बजगाईं, भावना गुरुङ, साक्षी लम्साल, सुजता थापा, अष्ट महर्जन लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ ।